China Medical Mask mpanamboatra sy mpamatsy | Teknolojia Shouzheng
Masinina fanapahana masaka avo lenta
Mamatsy mason-tsolika vita amin'ny flat automatique 1 + 1
Mamatsy mason-tsolika vita amin'ny flat automatique 1 + 2
Kn95 Mask Mamboatra Masinina
Maska Packing Machine
Tombontsoa & Kolontsaina
Fitaovana vita amin'ny mason-kiraro vita amin'ny 1 + 1
Anaran'ny vokatra: Maskitsika fitsaboana
Lafatra: sosona 3
Famenam-panivana: tsy voamboatra + manalefaka mitsoka + tsy misy voany
Habe: 17.5 x 9.5cm (na nangataka)
Karazana: mihantona sofina
Ny tombony: 3 sosona filtration, tsy misy fofona, fitaovana manohitra ny alerine, fonosana madio, fofonaina tsara. Mahomby hisorohana ny fidiran'ny vovoka, ny vovobony, ny volo, ny gripa, ny mikraoba sns ...
Klinko miafina: afaka manaraka ny fanitsiana ny tarehin'ny tarehy, mifanentana amin'ny tarehy High-elastic, boribory na boribory tafo ambany be, sofina milamina kokoa
Fampiasana: hopitaly, klinika, lab, mpitsabo nify, fampiasa isan'andro, fikosoham-bary, fanamazomana, namafa, tsofa, kitapo, na vovoka hafa.
Famonosana: 10pc / kitapo, 50pcs / boaty, 2000pcs / baoritra na namboarina manokana
Fenitra: ny fahombiazan'ny filtofan'ny bakteria ny saron-tava dia tsy tokony ho latsaky ny 95%. (Mitovy amin'ny fahombiazan'ny filtration ny bakteria amin'ny "YY 0469-2011 Maskical Maskical Mask")
Fanamarihana: Manana mason-javamaniry 4 koa sy saron-tava 5 isika.
Ny saron-tava fitsaboana dia fitaovana azo ampiasaina mba hialana amin'ny fihanaky ny aretim-pisefoana.
Ny fenitra masonay: YY / T0969-2013
BFE: 955%, fanamarihana ny sivana: 955%
Fitaovana sivana: tsy tenona + manondraka blown≥95% + tsy tenona.
- ny mason-tsivana FFP1 fanivanana ≥80% ny aerosol (tafaporitsaka anatiny anatiny <22%);
- ny mason-tsivana FFP2 fanivanana farafahakeliny 94% amin'ny aerosol (tafaporitsaka anatiny anatiny 8 8%);
- Ny saron-tava FFP3 fanivanana farafahakeliny 99% ny aerosol (tafaporitsaka anatiny) 2%.
Ahoana no fampiasana azy:
1.Alohan'ny hametahana saron-tava, diovy madio ny tananao amin'ny savony sy rano.
2.Manokatra ny vava sy ny oronao miaraka amin'ny saron-tava anao ary ataovy azo antoka fa tsy misy elanelana eo amin'ny tavanao sy ny saron-tava.
3.Afaovy mikitika ny saron-tava rehefa mampiasa azy ary, raha misasa tanana ianao.
4.Nosafosafo ny saron-tava rehefa mando.
5.Ao manala ny saron-tava anao dia esory amin'ny takelaka elastika, tsy hikasika ny eo alohany ary esory avy hatrany ao anaty fitoeram-baravarana mihidy.
Misoroka ny fahazoana otrikaretina:
Ny fahadiovana ny tanana dia iray amin'ireo fomba manan-danja indrindra hisorohana ny fahazoana sy hampielezana ny aretim-pisefoana. Sasao matetika ny tananao. Miezaha tsy hikasika ny oronao, ny masonao, na ny vavanao, alohan'ny hanasana ny tananao. Mialà amin'ny fifandraisana akaiky amin'ny hafa marary. Ny velaran-trano madio sy zavatra miaraka amin'ny tasy na fanadiovana rano rehefa misy. Raha marary ianao, mijanòna any an-trano mba tsy hampahory ny olona hafa.
Noho izany dia maro ny mpanamboatra masky maninona no misafidy anay?
1.Liara vidiny miaraka amin'ny kalitao avo lenta.
2.Mask dia miloko manga sy fotsy.
3.Produksi: 500000 pcs isan'andro.
4. Karazan'asa ho an'ny ankizy / lehibe.
5.Ny mpamokatra, nosedrain'ny andrim-pitsapana ofisialy an'i Shina ary mahafeno ny fenitra fanondranana China95% China (fifandraisana aminay ho an'ny tatitra momba ny fitsapana).
6. Ekipa mpivarotra matihanina, mihoatra ny 8 taona ny traikefa ara-barotra vahiny. 24 ora an-tserasera hanampy anao hamaha ny fanontaniana rehetra.
Previous: Maskisa mpandidiana
Manaraka: Fitaovana vita amin'ny mason-kiraro vita amin'ny 1 + 1
3 Maskidy tsy azo itokisana Ply
Milina fitonoana fitsaboana azo ekena
Maskidy tsy azo itokisana
Fitaovana medikaly tarehy
Masinina Mask marika masika
Masina Maskidy fitsaboana
Masera Manamboatra mikajy fitsaboana
Masinina Maskôtaly Masika tsy Miditra
Mask mpitsabo amin'ny fandidiana
Efitra 2212, trano fananganana Caijin, Shijiazhuang, Hebei, Sina
Antsoy izahay izao: 0086-18633492813